देशकै ठुलो पार्टी यसरी फुट्दै छ नेकपा – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/देशकै ठुलो पार्टी यसरी फुट्दै छ नेकपा
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरूले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षको आरोप छ ।
जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई झुक्याए…
स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले नै यो बैठक पार्टीमा ऐतिहासिक एकता वा फुटको आधार बन्ने सम्भावना रहेकेा बताएका थिए ।
उसो भए ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्न स्थायी कमिटीको बैठकले निर्देशन दियो भने उनले पार्टी विभाजन गर्लान् त ? यो त्यति सजिलो चाहिँ देखिँदैन ।
नायिका स्वेता खड्का बिहे पछि किन आइन विवादमा ? आखिर के राखेकी थिइन र स्वेतले उनका फ्यानहरुले यस्तो कमेन्ट गरे